Gnome tattoos: nchịkọta nke atụmatụ na ihe ọ pụtara | Igbu egbugbu
Gnome tattoos: nkọwa nke ihe ha pụtara na atụmatụ ha
Antonio Fdez | | Echiche antgha
Gnomes bụ otu n’ime ụdị akụkọ ifo kachasị ama ama n’ọtụtụ ụwa na ọdịbendị. Ndị a dwarfs na-enweghị atụ na-apụta n'akụkọ ifo nke ugwu Europe. N'azụ ha, ha nwere ọtụtụ akụkọ na akụkọ ifo ndị mepere emepe. N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya igbu egbugbu, ya pụtara anyị ga-anakọta ọtụtụ ụdị aghụghọ ka ị nwee ike nweta echiche maka egbugbu gị ọzọ.
Mana, tupu ị banye n'okwu ahụ, ọ dị mkpa ịnọgide na-amata akụkọ ifo na nke dị egwu nke gnomes. Dị ka trolls, ha na-achọ ibi n'okpuru ala na, dị ka akụkọ ifo ndị Sweden, Ha bụ ndị nlekọta nke akụ nke ala dị n'okpuru ala. Nke ahụ bụ, ha na-edobe ọla edo, ọla ọcha na ọla ndị ọzọ dị oke ọnụ a na-achọta n’ime eriri afọ ụwa. Maka nke a, dịka akụkọ ndị mba Nordic si kwuo, ọ bụ ihe ịtụnanya na-apụta n'ọnụ ụzọ ebe a na-awa okwute na ebe a na-egwupụta ihe.
Ozugbo etinyechara ya n'okwu ahụ ma mara ihe atụ nke gnome ahụ dị ka akụkọ ifo, Kedu ihe egbugbu gnome pụtara? Ma ọ bụ ka mma, Gịnị bụ akara ya? N'ihi na amaara obere ihe ndị a ama dị ka ndị na-arụsi ọrụ ike, a na-ahụta na ha nọ n'ogige ụlọ bara uru. Ka anyị cheta na dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, ndị gnom na-alọta n'abalị iji nyere anyị aka n'ọrụ ụlọ anyị.
N'ezie, n'adịghịkwa nnochi anya anyị nwere taa nke gnomes, na mbụ enwere ọhụụ dị iche iche nke gnomes ahụ, ebe ọ bụ na n'ozuzu ha na akụkọ ọdịnala, ha nwere nkwarụ ma laghachi azụ. Taa, ha nwere ọmarịcha ụzọ na ọ joụ. Na nkenke, egbu egbu a zuru oke maka ndị chọrọ igosi na ha na-arụsi ọrụ ike ma na-arụ ọrụ niile ha na-echere.
Gnome Tattoo Foto
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Echiche antgha » Gnome tattoos: nkọwa nke ihe ha pụtara na atụmatụ ha
Ghaa egbugbu, nri mara mma nke oke ohia na akpukpo aru gi
Tattoodị akara aka iji gosipụta ịhụnanya gị maka ibipụta akwụkwọ